Taliyaha ciidamada Xooga dalka ayaa sheegay in ciidamada Naafada Xooga dalka inaan laga saari doonin Isbitaal Martiini – STAR FM SOMALIA
aliyaha ciidamada Millitariga Dowladda Somaliya Maxamed Aadan Axmed, ayaa si qiiro leh u sheegay in ciidamada Naafada Xooga dalka Somaliya aanan laga rari doonin Isbitaalka Martiini ee Magaalada Muqdisho oo horay loogu amray Naafada inay halkaasi ka guuraan.
Jeneraal Maxamed Aadan Axmed, waxa uu sheegay isaga oo ilmeynaya ciidamada Naafada Xooga dalka Somaliya inay u dhaawacmeen oo ay u rafaadeen dalka Somaliya, ayna aheyd in lagu xishmeeyo deganaanshiyahooda Isbitaalka Martiini.
Jeneral Maxamed Aadan Axmed, ayaa sheegay Madaxweynaha Somaliya Xasan Sheekh Maxamuud in uu gudbinaayo in ciidamada Naafada aanan laga rarin Isbitaalka Martiini.
Taliyihii hore ee ciidamada Xooga dalka Somaliya Daahir Aadan Cilmi “Indha Qarshe” ayaa la sheegay inuu amray in ciidamada Naafada Xooga dalka Somaliyed laga raro Isbitaalka Martiini oo muddo ay deegansanayeen.
Ciidamada Naafada Xooga dalka Somaliyed ayaa u dhibtooday dalka iyo dadka Somaliyed oo Difaaca Qaranka ayeey ku beeleen lixaadkoodii, waxaana ay mudan yihiin daryeel badan inay siiso Dowladda Somaliya.